Ɔrekɔ Yerusalem (1-14)
Oduu Yerusalem (15-19)
Paul de mpanyimfo no afotu yɛɛ adwuma (20-26)
Nkurɔfo yɛɛ gyegyeegye wɔ asɔrefi hɔ; wɔkyeree Paul (27-36)
Wɔmaa Paul kwan sɛ ɔnkasa nkyerɛ nnipadɔm no (37-40)
21 Bere a yemiaa yɛn ani ne wɔn dii ntetewmu no, yɛfaa ɛpo so kɔɔ tee koduu Kos. Na ade kyee no, yɛkɔɔ Rodo, na yefi hɔ kɔɔ Patara. 2 Yehuu po so hyɛn bi a ɛretwam akɔ Foinike, na yɛkɔforo kɔe. 3 Bere a yeduu baabi a yɛn ani tua supɔw a wɔfrɛ no Kipro no, yesian ho wɔ benkum fam,* na yɛtoaa so kɔɔ Siria, na yekogyinaa Tiro. Ɛhɔ na na wobeyi hyɛn no mu nneɛma. 4 Yɛkɔhwehwɛɛ asuafo a ɛwɔ hɔ no, na yehuu wɔn, na yɛtenaa hɔ nnanson. Nanso asuafo no nam honhom no so ka kyerɛɛ Paul mpɛn pii sɛ onntu ne nan nnsi Yerusalem.+ 5 Na bere soe sɛ yefi hɔ, enti yesii kwan so toaa yɛn akwantu no so. Na wɔn nyinaa, a mmea ne mmofra ka ho, begyaa yɛn kwan koduu kurow no kurotia. Na yebuu nkotodwe wɔ mpoano hɔ bɔɔ mpae, 6 na yɛne wɔn dii nkra. Afei yɛkɔforoo po so hyɛn no, na wɔn de, wɔsan kɔɔ wɔn afi. 7 Yefii Tiro no, yɛfaa po so koduu Ptolemai. Na yekyiakyiaa anuanom no, na yedii wɔn nkyɛn da koro. 8 Bere a ade kyee no, yefii hɔ baa Kaesarea. Na yɛkɔɔ ɔsɛmpakafo Filipo a na ɔka mmarima baason+ no ho no fi, na yɛtenaa ne nkyɛn. 9 Ná ɔbarima yi wɔ mma mmea baanan a wɔnwaree,* na na wɔhyɛ nkɔm.+ 10 Na bere a yɛtenaa hɔ kyɛe kakra no, odiyifo bi a wɔfrɛ no Agabo+ fi Yudea bae. 11 Na ɔbaa yɛn nkyɛn bɛfaa Paul abɔso, na ɔde kyekyeree ɔno ara ne nan ne ne nsa, na ɔkae sɛ: “Asɛm a honhom kronkron no aka ni: ‘Ɔbarima a abɔso yi yɛ ne dea no, sɛɛ na Yudafo no bɛkyekyere no wɔ Yerusalem,+ na wɔde no bɛhyɛ amanaman mufo nsa.’”+ 12 Bere a yɛtee saa no, yɛne wɔn a wɔwɔ hɔ no nyinaa fii ase srɛɛ no sɛ ɔnnkɔ Yerusalem. 13 Ɛnna Paul kae sɛ: “Dɛn na moreyɛ yi? Adɛn na moresu na mopɛ sɛ mubu m’abam yi?* Mommma biribiara nnhaw mo. Awurade Yesu din nti, mayɛ krado sɛ wɔnkyekyere me wɔ Yerusalem. Na sɛ ɛsɛ sɛ miwu wɔ hɔ mpo a, mayɛ krado.”+ 14 Bere a wansesa n’adwene no, yɛanhaw no bio,* na yɛkae sɛ: “Yehowa* pɛ na ɛnyɛ hɔ.” 15 Nna yi akyi no, yɛboaboaa yɛn ho maa akwantu no, na yesii kwan so kɔɔ Yerusalem. 16 Asuafo a wofi Kaesarea no bi nso ne yɛn kɔe, na wɔde yɛn kɔɔ Kiproni bi a wɔfrɛ no Mnason nkyɛn. Ná ɔka asuafo a wodi kan no ho, na ne fi na na yɛbɛsoɛ. 17 Bere a yeduu Yerusalem no, anuanom no de anigye gyee yɛn. 18 Ade kyee no, Paul ne yɛn kɔɔ Yakobo+ nkyɛn, na na mpanyimfo no nyinaa wɔ hɔ bi. 19 Na okyiaa wɔn, na ofii ase kaa nea Onyankopɔn nam ne som adwuma no so yɛe wɔ amanaman no mu ho nsɛm nyinaa. 20 Bere a wɔtee eyi no, wofii ase hyɛɛ Onyankopɔn anuonyam, nanso wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Onua, wo ara woahu sɛ Yudafo mpempem pii abɛyɛ gyidifo, na wɔn nyinaa yere wɔn ho di Mmara no so.*+ 21 Nanso wɔate sɛ nkurɔfo rekeka sɛ, worekyerɛkyerɛ Yudafo a wɔwɔ amanaman mu nyinaa sɛ wɔnsɔre ntia Mose Mmara.* Wɔate sɛ worekeka nso sɛ wonntwa wɔn mma twetia,* na wonnni amammerɛ so.+ 22 Enti dɛn na yɛbɛyɛ wɔ ho? Nea ɛbɛyɛ biara wɔbɛte sɛ woaba. 23 Enti yɛ nea yɛreka akyerɛ wo yi: Yɛwɔ mmarima baanan a wɔahyɛ bɔ. 24 Fa saa mmarima yi kɔ, na wo ne wɔn nkodwira mo ho na tua ka ma wɔn, na wonyi wɔn ti. Ɛbɛma obiara ahu sɛ nea wɔretete fa wo ho no nyɛ nokware. Na mmom wonam pɛpɛɛpɛ, na wo ara nso wudi Mmara no so.+ 25 Na gyidifo a wofi amanaman mu no de, yɛakyerɛw gyinae a yɛasi no akɔma wɔn sɛ, wɔntwe wɔn ho mfi nea wɔde abɔ afɔre ama abosom+ ne mogya+ ne mmoa a wɔakum wɔn a wɔanhwie wɔn mogya angu+ ne aguamammɔ*+ ho.” 26 Enti ade kyee no, Paul faa mmarima no, na ɔne wɔn nyinaa kodwiraa wɔn ho,+ na ɔkɔɔ asɔrefi hɔ kɔkyerɛɛ da a wobewie wɔn ahodwira no ne bere a ɛsɛ sɛ wɔbɔ afɔre ma wɔn mu biara. 27 Bere a nnanson no reba awiei no, Yudafo a wofi Asia no huu no wɔ asɔrefi hɔ, na wɔmaa nnipa no yɛɛ gyegyeegye, na wosusoo ne mu. 28 Na wɔteɛteɛɛm sɛ: “Israel mmarima, mommɛboa! Ɔbarima yi na ɔkyerɛkyerɛ nnipa nyinaa wɔ baabiara sɛ wɔnsɔre ntia yɛn man yi ne yɛn Mmara ne ɛha yi.* Nea asɛe asɛm no koraa ne sɛ, ɔde Greecefo aba asɔrefi ha, na wagu kronkronbea yi ho fĩ.”+ 29 Nea ɛte ne sɛ, na wɔadi kan ahu Efesoni Trofimo+ sɛ ɔka ne ho wɔ kurow no mu, na na wɔn adwene yɛ wɔn sɛ Paul de no baa asɔrefi hɔ. 30 Na kurom hɔ nyinaa yɛɛ bagyabagya, na nkurɔfo no de mmirika betwa hyiae, na wosusoo Paul mu twee no fii asɔrefi hɔ. Na ntɛm ara, wɔtotoo apon no mu. 31 Na bere a wɔyɛe sɛ wɔrekum no no, asraafokuw no sahene no tee sɛ Yerusalem nyinaa ayɛ bagyabagya. 32 Enti ntɛm ara, ɔfaa asraafo ne asraafo mpanyimfo, na wɔde mmirika kɔɔ hɔ. Bere a nkurɔfo no huu ɔsahene no ne asraafo no, wogyaee Paul hwe. 33 Ɛnna ɔsahene no kɔɔ hɔ kɔkyeree no, na ɔhyɛe sɛ wɔmfa nkɔnsɔnkɔnsɔn abien ngu no.+ Afei obisaa onipa ko a ɔyɛ, ne nea wayɛ. 34 Na nnipadɔm no mu bi fii ase teɛteɛɛm. Ebi ka sɛɛ, na ebi nso aka sɛɛ. Na dede no nti, wantumi anhu asɛm no mu yiye. Enti ɔhyɛe sɛ wɔmfa Paul mmra asraafo asoɛe hɔ. 35 Nanso bere a oduu stɛps no so no, nnipadɔm no basabasayɛ nti, asraafo no maa no so, 36 na nnipadɔm kɔɔ so dii akyi, na wɔteɛteɛɛm sɛ: “Munkum no!”* 37 Bere a wɔreyɛ de Paul adu asraafo asoɛe hɔ no, obisaa ɔsahene no sɛ: “Metumi aka asɛm bi akyerɛ wo anaa?” Ɛnna ɔsahene no nso bisaa no sɛ: “Wutumi ka Greek kasa? 38 Ɛnyɛ wone Egyptni a da bi wokekaa nkurɔfo ti boom ma wɔtew atua, a wode mmarima 4,000 a wɔtwe sekan kɔɔ sare so no?” 39 Ɛnna Paul kae sɛ: “Nea ɛte ne sɛ, meyɛ Yudani.+ Mifi Tarso+ a ɛwɔ Kilikia; kurow a mifi mu no agye din. Enti mesrɛ wo, ma me kwan ma menkasa nkyerɛ ɔmanfo no.” 40 Bere a ɔsahene no maa no kwan no, Paul gyinaa stɛps no so, na ohim ne nsa kyerɛɛ nnipa no. Bere a ɛhɔ yɛɛ dinn no, ɔkasa kyerɛɛ wɔn wɔ Hebri kasa mu.+ Ɔkae sɛ:
^ Anaa “baabi a na ahyɛn gyina.”
^ Nt., “mmaabun.”
^ Anaa “moma me koma bubu?”
^ Nt., “yɛyɛɛ komm.”
^ Anaa “wɔn nyinaa bɔ Mmara no ho mmɔden.”
^ Nt., “wɔnwae mfi Mose ho.”
^ Anaa “asɔrefi yi.”
^ Anaa “Munyi no hɔ!”